Logistics Engineers Job Inkcazelo Template – JobDescriptionSample
ekhaya / Ingcaciso yomsebenzi / Logistics Engineers Job Inkcazelo Template
Logistics Engineers Job Inkcazelo Template
superadmin Isilimela 18, 2016 Ingcaciso yomsebenzi Shiya amazwana 461 Views
Loan Advisors Umsebenzi Duty lesampula
Computer Inkxaso-User Specialists Job Duty Template
Game Abaqambi Umsebenzi Duty lesampula
Isimbo okanye kuhlolwe izisombululo enenkcukacha kwimisebenzi ezifana umzekelo yenethiwekhi, izithuthi noun, izenzo kunye nokuhlolwa indlela, okunciphisa iindleko, uphuhliso ubuchule, ukunikezelwa nomzila noun, okanye ulawulo ulwazi.
qhinga Sango kukho abathengi.
Udliwano abasebenzi kakhulu okanye ezithuba utyelelo ukuchonga imveliso- isixhasi, inani – inkxaso, okanye ukwehlisa amathuba -supply.
Logistics ngqo abahlaziyi’ umsebenzi.
Ukuphuhlisa specs malunga isiqulatho, izixhobo, nokwakhiwa iziko, okanye ubuchule -managing nezixhobo.
izithembiso zezivumelwano begxeka, features lomthengi, okanye idatha leyo inxulumene ukuqinisekisa iimfuno uncedo okanye namalungiselelo.
Ukuqinisekiswa okanye wenze iingxelo kwi zolungiselelo elakhelwe okanye ukulungiswa – iinkqubo ulwazi esweni okanye data engqina.
Chonga okanye ukuvelisa iindlela zokusebenza eqhelekileyo okanye izikhokelo inkampani ukuphucula imisebenzi ukuba awusebenzisi.
Ukuphuhlisa okanye ukugcina uphindo iindleko, uqikelelo, okanye kusetyenziswe iindleko.
Qinisekisa nezicwangciso zenkxaso iinkcukacha, umzekelo amandla facts, neemfuno zeSebe, okanye izicwangciso ukugcinwa okanye ukhuseleko.
Yenza izifundo izicwangciso okanye ihlaziya, ezifana zeengxelo mzuzu umzekelo, analyses-zero base, ihlaziya izinga, ihlaziya inethiwekhi, ejikelezayo-indlela uhlaziya, okanye ihlaziya supply-chain.
Hlalutya okanye guqulani ulwazi namalungiselelo ezibandakanya inkonzo lwabathengi .
Nika ulwazi okanye ubuchule nobuchwepheshe inkxaso nemveliso nenamandla indlela okhulayo, okanye into, iimveliso okanye inkampani.
Cinga ukusebenza kweenkqubo ezikhoyo okanye elizayo zamalungiselelo.
Izicwangciso ukuba asebenzise iinkqubo ngumzekelo yokusingatha izinto ezifana inkqubela inkqubo zokusebenza okanye uyilo iziko okanye ifomathi.
Umlinganiselo usebenziso ubonelelo technology elandelayo, isicelo kubekwa webbased, okanye iindlela swa kububulumko nkulu imbewu okanye iziko ukuhanjiswa ukusebenza.
Khupha ezibonisa ukusebenza abalulekileyo amacandelo, izixhobo eemviwo zangaphakathi, okanye imilinganiselo nobucukubhede.
Ukunakana iindleko-inciphise okanye indlela-uphuculo lweendlela ezizezinye nobucukubhede.
Ukuvavanya ukusetyenziswa zobunjineli, ezifana umzekelo jikelele iinkqubo positioning (Ukuhamba), radio frequency id (RFID), software ukhetho zomzila, okanye ubuchule satellite linkup, sandise imveliso zokuhamba.
Lungiselela iindlela linikisa okanye iipateni sengqiqo nezimiso isizukulwana.
Yila zokudlela umthombo ebanzi ukunciphisa iimpembelelo zokusingqongileyo okanye iimali.
Style kukhule iindawo ukwabiwa.
Ukumisela nokwenzeka ekulungiseni iinkonzo ezikhoyo okanye ukuyila izakhiwo, igxile kwimiba umzekelo ajenda, indlu anikele, imali, ezifunwa complex .
Yenza okanye imisebenzi yophatho logistics doc ukuba reverse ukuqinisekisa ngempumelelo enkulu imveliso yokurisayikilisha, kwakhona, okanye ukulahlwa esele.
Yenza uphicotho zokusingqongileyo ezifana ugcino umzekelo, ukwabiwa, okanye zokuhamba, ukuba izinto namalungiselelo.
Yenza imifuziselo okanye iimeko iqala isiphumo umzekelo igesi amanani, amaxabiso umzila, iirhafu zombane, ukulungisa iimeko.
begxeka emhlabeni, lonke, okanye uhambo karhulumente okanye ubuchule akhawunti malunga izicwangciso zokuphucula ukusebenza okanye ukunciphisa impembelelo kokusingqongileyo yezenzo nokhunye.
Ukumisela ngumba usebenzisa ukuvunywa namathemba eziphilayo ukungeniswa.
Nika amandla yamalungiselelo okanye ihlaziya yocwangciso ubuchule malunga izithuthi okanye ukuthengiswa imisebenzi.
Zuza okanye ubuchule doc zokunciphisa okanye ukunciphisa carbon kwemveliso okubangelwa izixhobo okanye iimveliso’ motion.
Linganisa isiphumo ukuba kwezendalo okanye amandla ngobuchule izenzo namacebo, ukuqesha carbon software sokunciphisa.
Imisebenzi Task Kuyimfuneko
Ukufunda izivakalisi Isicatshulwa-Ukuqonda nemihlathi abhalwe iifayile ezinxulumene nomsebenzi.
Active-Ukuphulaphula-Ukubonelela kugxininiswa kwisikolo siphela oko abanye bathi, ukufumana ixesha kunye namandla ukuze baqonde ukuba wadala izinto, imiba kokubuza elungile, kunokuba bhe kwi meko engamkelekanga.
Ukuvelisa-In ukubhala kungekhona nje ezingafanelekanga ukuba iimfuno abaphulaphuli uncokola ngempumelelo,.
Ukunxibelelana-Ukuthetha nabanye ukuba ukwabelana data eyiyo.
Math-Ukusebenzisa maths ukuba ukulungisa iingxaki.
izisombululo Technology-Ukusetyenziswa kunye nemigaqo yenzululwazi ukulungisa iingxaki.
Critical Ukucinga-nokusetyenziswa ingqiqo kunye nezizathu ukuba baqaphele amandla kunye nobuthathaka izisombululo ezizezinye, ngeziphumo okanye iindlela iingxaki.
imiphumela Active ulwazi entsha i-Learning-Ukwazi malunga ikamva ngamnye kunye nomnikelo problemsolving nokwenza izigqibo.
Learning Iindlela-Ukukhetha kunye nokusebenzisa iinkqubo teachingOReducational kunye nobuchule ezazibonisa ingxaki eyalela okanye xa sele uyincutshe ekudlaleni iingongoma ezintsha.
Ukukhangela-Ukulandelela / Ukumisa usebenziso kwabantu ezahlukeneyo, wena, okanye amashishini cinga amanyathelo okulungisa okanye ukwenza utshintsho.
Social Perceptiveness-Ukuba abazi kwabanye’ nokwenzekayo nokuqonda kuba kunga- mabaziphathe.
Dexterity-Ukutshintsha izenzo phantsi kwabanye’ ukuziphatha.
Marketing-Ndeyisela abanye ukuba atshintshe iingcamango okanye izenzo zabo.
Uthetha-thethwano-Ukuhambisa abanye ngokuhlangeneyo kwaye uzama axolelanise mahluko.
Sokuyalela-Ukufundisa abanye indlela-ukuba wenze into.
Iinkonzo zoLwazi-Bamfuna sifuna iindlela ukuxhasa abantu.
Advanced ukusombulula iingxaki-zokwahlula ubunzima ezimbaxa kunye nokuphengulula data into enxulumene baphonononge kwaye ukwakha ukhetho ekukhangeleni izisombululo.
Imisebenzi Evaluation-Ukuqwalasela iminqweno neemfuno into ukuvelisa uyilo.
Technology Design-Ukungqamanisa iimpahla okanye ukwenza kunye nobuchwepheshe ukusebenza umsebenzisi ufuna.
izixhobo zokufaka-Ukongeza, imishini, zikagesi, okanye izicelo ukuzalisekisa iimfuno.
iinkqubo computer Programming-kokuqamba emalunga nezicelo ezahlukeneyo.
Umsebenzi yokulinganisa umkhondo zokubukela, khwlzleyo, okanye iimpawu ezahlukileyo ukuqinisekisa kukho umatshini owenza ngokufanelekileyo.
Imisebenzi kunye nemisebenzi Ulawulo-oPhetheyo lwendlela okanye iimveliso.
Izixhobo Ulondolozo-Ukwenza eso kuyinto eqhelekileyo kwi izixhobo zijongwayo xa.
Zokusombulula-Ukucacisa izinto ezibangela iingxaki ukuba awusebenzisi izigqibo oko ulwalathiso ukuya ngayo.
Ukulungisa-belungisa iimveliso okanye ubuchule besebenzisa izixhobo eziyimfuneko.
Quality-Control Uphando-Ukuzaliswa iimviwo nohlolo kweempahla, abanikezeli, okanye iinkqubo ukuze alinganise umgangatho okanye ukusebenza.
Isigwebo and Decision Making-ingqalelo iindleko lwezizalwane izinto ezinkulu malunga amanyathelo ezinokwenzeka ukufumana enye zivunywa.
Systems Analysis-isigqibo iinguqulelo nje ngayo ekubekeni, iinkqubo, kananjalo iimeko nefuthe iziphumo na, oluhlobo luni na indlela kufuneka enze.
Methods Analysis-Ukuchonga izenzo okanye ezibonisa komsebenzi kwakunye ezichanekileyo okanye izenzo kwafuneka imfuneko yokuphucula ukusebenza, xa kuthelekiswa neethagethi kumatshini.
Ixesha-Management-Ukuphatha sihlandlo zabucala kunye nabanye’ ithuba elinye.
Administration of Financial Resources-Ukumisela mali ziya kungekudala kusetyenziswa ngayo ukuze kwenziwe umsebenzi, nentengiso ezi inkcitho.
Imisebenzi ye Material Resources-Ukufumana kwaye ngokondela echanekileyo yokusebenzisa izixhobo, Iimbonakalo, kunye nezixhobo ezifunekayo ukuze benze umsebenzi okhethiweyo.
Kweliso Personnel Resources-Ukuphuhlisa, ekhuthazayo, nokukhokela abantu njengoko ukusebenza, ukubona abantu kwalelo umsebenzi.
Degree Connect kaThixo (okanye esinye isigaba EZIMBINI-yr)
phezu 4 iminyaka, kufika ABANYE iminyaka yaye kubandakanya
Imfuneko Job Leadership Skills
Wempumelelo / Umzamo – %
nenamandla – %
Ukukhathalela Abanye – %
Ukukwazi / nsimbi – %
Gxila Iinkcukacha – %
Uphicotho amandla banokuluthwala lweenkqubo nenkqubo okanye izakhiwo. May also perform investment-grade audits of techniques …